ဟုတ်ကဲ့! ဟုတ်ကဲ့! ဟုတ်ကဲ့! ဘာလို့လဲဆိုတော့ရူပ မင်းကြိုးစားနေသလိုပဲ” ရှေ ရေးသားခဲ့သည်။ ကျနော့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကသူတို့နဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့ရာထူးတစ်ခုအကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့မြို့အစည်းအဝေးတွေမှာမရှိပါဘူး။ ငါငြင်းခုံ, တောင်းပန်နှင့်တစ် ဦး ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်သူ့ကိုနှင့်အတူအသနားခံ။ ၎င်းသည် ၀ တ်စုံသည်သင့်တော်သောလစာနှင့်အညီသင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့ ... မ budge ။
အခုတော့ခွင့်ပြုသူအများဆုံးဖွယ်ရှိကမ်းလှမ်းမှုကိုရလိမ့်မယ်။ သူ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းရည်၊ သူ၏ပင်ကိုစရိုက်၊ မောင်းနှင်မှုနှင့်သံသယတို့ကိုငါသံသယမဖြစ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်ပြောသော 'ကျောင်းဟောင်း' ဟုငါလုံးဝခံစားခဲ့ရသည်။ သူနှင့်ငါနှစ် ဦး စလုံးဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့နေသောကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမတူခဲ့ဘူး၊ ငါနေ့တိုင်းလည်စည်းချခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါကစိတ်ထဲမထားဘူး။ ငါဝန်ခံရမယ်, ပါဘူး။ 🙂
ကျွန်တော်သူ့ကို ဆက်၍ စကားပြောနေစဉ်တွင်သူ့အတွက်ကောင်းသောအဖြေမရှိပါ။ သို့သော် ၀ တ်စုံတစ်ခုကပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နောက်ထပ်လေးစားမှု။ တစ် ဦး ကဝတ်စုံကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ပါ။ ငွေကိုယူပါ။ နောက်ခန်းအထိခြောက်သွေ့အောင်သန့်ရှင်းရေးထဲထည့်ပါ။ ပျက်စီးခြင်းကဘာလဲ။ ဘယ်သူကမှ ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂျင်းဘောင်းဘီထဲကကောင်လေးကိုပြုံးပြနိုင်တယ်။
အရင်တုန်းကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ် မဟုတ် သူတို့၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကြောင့်လူများကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။ ကံဆိုးတာပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းထူးချွန်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုငါဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ငါအရင်ကမစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ရှေကခေါင်းကိုထိတယ်၊ ကြိုးစားနေ။ အဆိုပါဝတ်စုံကိုအတွက်ကောင်လေး (သို့မဟုတ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်) ဖြစ်ခဲ့သည် ကြိုးစားနေ။ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ပြီး ၀ တ်ဆင်ကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ၀ န်ဆာကို ၃ ကြိမ်ချည်ထားသည်။ ကော်လာတံများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နာကျင်လိုက်လေခြင်း! ဒါပေမယ့်သူတို့ကလုပ်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ကြိုးစားနေကြလို့ပဲ။